Ajakis oo lagu soo celiyay Muqdisho kana shekeeyay sidii loola dhaqmay intii uu Hargeysa ku xirnaay!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Ajakis oo lagu soo celiyay Muqdisho kana shekeeyay sidii loola dhaqmay intii uu Hargeysa ku xirnaay!!
Ajakis oo lagu soo celiyay Muqdisho kana shekeeyay sidii loola dhaqmay intii uu Hargeysa ku xirnaay!!
Majaajiliistaha caanka ah Cabdi Muriidi dheere oo loo yaqaan Ajakis ayaa maanta laga soo dejiyay garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kadib markii laga soo musaafuriyay magaaada Hargeysa.
Maxamed Yuusuf waa Wiilkii Catoosha wiilkaas ayaa uxertay maxaa Adeerkeen Siil laayo ugu soo hadal qaaday Faaliyaha
Majaajiliiste Ajakis ayaa shalay lagu xiray magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland xili uu garoonkaasi Transit kusii marayay kuna sii jeeday magaalada Jigjiga ee xarunta maamulka Somaliland Camal ah.
Previous PostMaxkamada ICJ oo go’aan ka gaartay Dacwada Badda ee Kenya iyo Soomaaliya!! Next PostLabo Qarax oo ka dhacay magaalada Jiddah iyo Faah faahino kasoo baxaya!!